Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Gumiguru 26, 2018
Hurongwa hweMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa hwekupemberera kusvitsa makore gumi nemapfumbamwe kwebato irikubva parakavambwa, pamwe nekugadzwa kwaVaChamisa semutungamiri akasarudzwa nevanhu, kuri kuenderera mberi mangwana kuGwanzura stadium.
Vagari vemuBulawayo vanopengera komisheni yaVaKgalema Motlanthe vachiti vanoda kuti nyaya yeGukurahundi itange yataurwa nezvayo kwete kuti komisheni iyi inzwe humbowo hwezvakaitika pavanhu vakapfurwa nemasoja muHarare muna Nyamavhuvhu.
Vagari vemuChitungiwiza vanoti hurumende inofanirwa kutsigira makunzuru emumaguta nemaruwa nemari kuitira kuti akwanise kupinza varapi basa nekutenga mushonga kuitira kuti vanhu vasafe nezvirwere zvechinyakare zvakaita sekorera netyphoid
Varimi vochema chema nekukwira kwaita zvinhu zvekurimisa.
Mitambo yeChibuku Super Cup semi finals yotsviriridza mukupera kwesvondo.
Muchirongwa cheLiveTalk na 8pm tiri kutarisa mhirizhonga yaitika muBulawayo apo vanhu vanetsana nekomisheni yaVaMotlanthe